Ento mivoaka izy: Vonona ny EU hamely antsika amin'ny sarany amin'ny laharana Airbus-Boeing
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ento mivoaka izy: Vonona ny EU hamely antsika amin'ny sarany amin'ny laharana Airbus-Boeing
The vondrona Eraopeanina vonona ny hametraka ny valifaty amin'ny herintaona amin'ny taona amerikana, hoy ny minisitry ny vola frantsay Bruno Le Maire. Ho tafiditra ao anatin'ny fifanolanana maharitra amin'ny famatsiam-bola ho an'ireo mpanamboatra fiaramanidina izy ireo Airbus ary Boeing.
"Ny ady ara-barotra dia tsy tsara ho an'iza na iza," hoy i Le Maire tamin'ny mpanao gazety ny Alakamisy raha niresaka momba ny fahavoazana nateraky ny fifandonana amerikana-Sina.
Nilaza izy fa i Eropa dia miomana amin'ny sazy mety hitranga any Etazonia momba ny fifanolanana fanampiana amin'ny fiaramanidina, ary "tokony ho fantatry ny Amerikanina fa vonona ny handray andraikitra isika."
Nanampy ny minisitra fa nanery ny hisian'ny “fifanarahana finamanana” miaraka amin'ny solontenan'ny varotra amerikana Robert Lighthizer izy.
Washington sy Bruxelles dia voarohirohy tamin'ny fifanolanana naharitra, nifampiampanga ho nanome fanampiana tsy ara-dalàna an'ireo mpanamboatra fiaramanidina tsirairay avy ary namela ireo orinasa handray tombontsoa amin'ny fanampiana avy amin'ny fanjakana.
Nandrahona ny hamonoana entana mitentina $ 11 miliara avy amin'ny EU amin'ny vidin'ny fanafarana ny filoham-pirenena amerikana Donald Trump taorian'ny nahitan'ny World Trade Organisation (WTO) fa ny fanampiana ara-bola ataon'ny EU ho an'ny Airbus dia miteraka “vokadratsin'ny” an'i Etazonia.
Nanapa-kevitra ny WTO tamin'ny volana Mey fa nanohana ara-dalàna ny Airbus i Eoropa, ka nandratra an'i Boeing, mpifaninana amerikana. Ny vondrona eropeana dia nitondra tranga nitovy tamin'ny WTO, miampanga ny governemanta amerikana ho nanohana ara-dalàna an'i Boeing.